शीर्ष कारणहरू अष्ट्रिया भ्रमण गर्न - यसले हामीलाई के प्रस्ताव गर्दछ? | Absolut यात्रा
अस्ट्रिया एक यूरोपीय देश हो जसको राजधानी भियना हो। यसले यात्राको ती प्रकारहरूमा थप गर्दछ जुन प्रेममा खसेको थियो, यदि तपाईं चाहानु हुन्न भने पनि। सब भन्दा धेरै प्रतीकात्मक शहरहरू साल्जबर्ग हो, जसले हामीलाई होहेन्सल्ज़बर्ग किल्लाले मोहित पार्छ, यसको क्याथेड्रल सहितको र यसको सबैभन्दा प्रसिद्ध सडक, गेट्रीडागासे पनि।
अर्को शहर जसले तपाईंलाई चकित पार्छ इन्सब्रुक हो, जुन पहाडी परिदृश्यले घेरिएको छ। यस्तै केहि चीजहरू छन्, यद्यपि ताल पनि समावेश गरिएको छ, जुन हामी हलिस्ट्याटमा भेट्टाउने छौं, जुन सब भन्दा सुन्दर शहरहरू मध्ये एक मानिन्छ। यद्यपि यति धेरै परिचित छैन, तर राम्रो स्मारकहरू र दृश्यहरू ग्राजको साथ छ।
यदि हामी भियनाको बारेमा कुरा गर्छौं भने हामीले आवश्यक स्टपहरू भन्दा केहि बढी गर्नुपर्दछ। दुबै शोनब्रुन प्यालेसमा र यसको राष्ट्रिय पुस्तकालयमा वा रिंगस्ट्रेस एभिन्यूमा, किनकि यसले स्थानको महत्त्वपूर्ण स्मारकहरूमा नेतृत्व गर्दैन। बेलवेदेर प्यालेस वा स्ट्याडपार्क र सेन्ट स्टीफनको क्याथेड्रल अन्य मुख्य पोइन्टहरू हुन्।
लिन्ज डेन्यूबको किनारमा रहेको अर्को सहर हो जुन हामीले पनि भ्रमण गर्नुपर्नेछ। अवश्य पनि, यदि तपाईं खेलमा शर्त लगाउन चाहनुहुन्छ र तिनीहरू बीच, स्कीइ।, तब तपाईं अस्ट्रियाको सेन्ट एन्टोन am आर्लबर्ग जानुहुन्छ।
द्वारा दानियल बनाउँछ5महिना .
अस्ट्रिया कुनै पनि यात्रा मा तपाइँ कम्तिमा एक दिन एक तालिका राख्नुपर्दछ पारंपरिक रेस्टुरेन्ट मा राम्रो दिन ...
द्वारा दानियल बनाउँछ6महिना .
अस्ट्रियाको राजधानी अन्वेषण गर्ने र यसको सब भन्दा चाखलाग्दो कुनामा पत्ता लगाउने सब भन्दा उत्तम तरिकाहरू मध्ये एक प्रयोग गर्नु हो ...
द्वारा दानियल बनाउँछ 11 महिना .
अस्ट्रियाको राजधानी निस्सन्देह युरोपको सबैभन्दा सुरुचिपूर्ण र भव्य शहरहरू मध्ये एक हो। त्यो सबै…
यदि तपाईंसँग पेन्डि trip यात्रा छ, केही बेरमा र यो तपाईंको गन्तव्य हो भने, तपाईं निश्चित रूपमा के हेर्ने भनेर सोच्नुहुनेछ ...
भियना मा के यात्रा गर्ने
डेन्यूबको किनारमा हामी यो सुन्दर शहर पाउँछौं। अष्ट्रियाको राजधानी तपाईको भ्रमण बिना रहदैन ...
द्वारा Absolut अस्ट्रिया बनाउँछ5वर्ष .
गत हप्ता बिहीबार बिहीबार, सेप्टेम्बर १ मा, चाइना मेजिक भन्ने नामको एक अभूतपूर्व शो ... भियनामा यसको ढोका खोल्यो।
अस्ट्रियाको इतिहास हब्सबर्ग राजवंशबाट शुरू हुँदैन वा यसको अन्त्य हुँदैन, यद्यपि वर्षहरू ...
भियना, १ th र २० औं शताब्दीको बीच
भियनामा छँदा केहि गर्नु छ भने, यो शहर पैदल यात्रा गर्नु हो। त्यहाँ धेरै सम्भावित मार्गहरू छन्, धेरै पर्यटक पदयात्रा, ...
अस्ट्रो हंगेरी साम्राज्य को अन्तिम सम्राट
एउटा समय थियो जब अस्ट्रिया विशाल साम्राज्यको प्रमुख थियो जुन अन्त पछि विघटनकारीमा समाप्त भयो ...
अष्ट्रियामा टिप, दायित्व वा विकल्प
शिष्टाचारले धेरै व्यक्तिको व्यवहारलाई नियमित गर्दछ। यसैले, हामीसँग रहेको सांस्कृतिक स्तरका अनुसार हामी बढी वा कम ...
शोनब्रुन प्यालेसको भूलभुलैयाबाट हिँड्नुहोस्
भियनामा देख्न सकिने एउटा हो सुरुचिपूर्ण र महान शोनब्रुन प्यालेस। भ्रमणहरू जहिले पनि उत्कृष्ट हुन्छन् र ...